ZAPU Youths and Elders In Fistfight
Dumiso Dabengwa is seen here at the PF ZAPU Congress in December 2008. This was the first Congress after the breakaway from ZANU PF. There were disturbances last week in Bulawayo when youths and elders clashed in Luveve and ended up fighting. It is alleged that Cyril Ndebele, the former Speaker of Parliament who is now a member of the PF ZAPU breakaway party, was found addressing youths and urging them to dump Dabengwa in his favour
Scores of youth from Dumiso Dabengwa's revived PF ZAPU have been detained by police after an altercation with Elders of the party in the Bulawayo Suburb of Luveve.
I spoke with Dr Themba Dlodlo a few minutes ago who told me: "It's an internal thing. It's people who left ZANU PF who were causing problems but we are sorting it out."
But rest assured that ZANU PF will try and use this to smear this new party and cast aspersions on it and its leadership. I doubt they will succeed, because Dabengwa is immensely popular in the southern region of Zimbabwe and his party is destined to lock up that area, freezing out both MDCs and ZANU PF.
bulawayo dumiso dabengwa infighting pf zapu latest zimbabwe news luveve PF ZAPU Breakaway themba dlodlo